Martida Makrafoonka iyo Dhalinyarada Afrika
Barnaamijka waxaa marti u ah 3 dhalinyaro oo ka qayb galay Shirkii Dhalinyarada Hogaamiyaaasha Mustaqbalka Afrika ee Washington.
Dhalinyaradan oo ka kala socta So malia iyo Djibouti ayaa la kulmay madaxweyne Obama.
Waxaana shirkaasi ka qayb galay ku dhawaad 120 dhaliyaro ah oo ka socotay qaaradda afrika
Najma Axmed Cabdi oo ka socotay Somalia iyada oo hogaamiye ka ah ururka isku tagga dhalinayarada hogaamiyaasha Somalia SYLF, isla markaasina si toos ah Madaxweyne Obama su’aal u weydiisay ayaa inoogu marti ah barnaamijka.
Sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya Hodan Cabdi Cismaan oo khabiir ku ah dhinaca la talinta shirkadaha, iyada oo shirkad dhinaca dharka iyo qurxinta ah asaastay kana socotay Jamhuuriyadda Djibouti iyo Migil Xasan Faarax oo shirkad dhinaca xisaabaadka ah ka aasaasay Djibouti.
Dhalinyaradan oo ka kala soctay Somalia iyo Djibouti ayaa la kulmay madaxweyne Obama.
Waxaana shirkaasi ka qayb galay ku dhawaad 120 dhalinyaro ah oo ka socotay qaaradda Afrika.
Najma Axmed Cabdi oo ka socotay Somalia iyada oo hogaamiye ka ah ururka isku tagga dhalinayarada hogaamiyaasha Somalia SYLF,isla markaasina si toos ah Madaxweyne Obama su’aal u weydiisay ayaa inoogu marti ah barnaamijka.